Ufunda kanjani ngezihloko ezisemakethe yamasheya? | Ezezimali Zomnotho
Ufunda kanjani ngezihloko ezisemakethe yamasheya?
UJose recio | | Ibha
Izimakethe zamasheya zigcwele ama-clichés noma imishwana esethiwe engaphezulu noma engaphansi, engasetshenziswa ukwenza isu lokutshala imali. Ezimweni eziningi kunjalo kucacisa kakhulu yiluphi utshalomali kumasheya. Yize kungekho ukuswela kwehaba noma izinhlelo zabo ezimbalwa ngokusebenzisa i- ukusebenza oyithumela emabhange. Ngamafuphi, kuyindlela yangempela yokufunda isiko lezezimali, noma ikakhulukazi imvelo yemakethe yamasheya.
Kodwa-ke, akufanele isebenze njengesinqumo sokuthenga noma ukuthengisa amasheya. Ukulimaza ezinye izenzo ezisebenza kangcono kakhulu ezithathwe ku- ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe noma okuyisisekelo. Ungusomaqhinga weqiniso lapho zonke izenzo zakho ezimakethe zezezimali kufanele zilawulwe khona. Ngaphandle kwanoma ikuphi, baqinisekisa ukuphumelela kokusebenza kwemakethe yamasheya. Lapho inhlanhla ethile izohlale ikusiza ukuqedela izinhloso ezibekwe kutshalomali.
Lezi zihloko ezilinganisweni ziyingxenye yejagoni ekhetheke kakhulu echaza abatshalizimali. Kwezinye izimo noma kwezinye izimo, impela abantu abangaphezu koyedwa bazozizwa bexaka njalo lapho bezizwa, ngaphandle kokwazi kaningi ukuthi le misho ikhombisani. Kuzoba isikhathi lapho wazi ukuthi yiziphi izihloko ezingamaka izenzo zomsebenzi wakho. Sethemba ukuthi kuzoba ngcono futhi awukwazi ukuzisola ngezinqumo zakho.
1 Izihloko: chaza izimo
2 Kuxhunywe kuzabelo
3 Ukuthenga ngamahemuhemu ...
4 Udinga imali eningi
5 Ngokuya ngokuqashwa
Izihloko: chaza izimo
Eminingi yale misho ineminyaka eminingi ubudala futhi abazali bakho kungenzeka ukuthi bayisebenzisa eminyakeni eminingi eyedlule. Ngokomlando babuswa ukusebenza kahle okukhulu. Hhayi ngeze, zimele iqiniso noma isimo emakethe yamasheya. Futhi abazama ukukwenza ukumela ukuthi bazithinta kanjani lezi zimakethe. Zingaba yingxenye yesichazamazwi esasihloselwe noma iyiphi iphrofayili yabatshalizimali.
Esinye sezihloko ezivame kakhulu ezisezindebeni zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Akuyona enye ngaphandle kwalelo zwi elidumile elisho "uwina njalo esikhwameni”. Akuhlangane njalo futhi kuhlala kaningi. Yize incazelo yalo yangempela ibhekisa ku- imisebenzi yesikhathi eside. Kulezi zimo ingasetshenziswa kahle kakhulu. Kunoma ikuphi, kuyinkulumo ethwala ukuguquguquka okukhulu ngokwencazelo. Akubona bonke abatshalizimali abayiqonda ngendlela efanayo.
Abanye, kunalokho, bakhombisa iqiniso eliqandayo futhi lokho kungakusiza wenze imali oyongele ngempumelelo iphumelele. Kushiwo okudala manje "ukuthi i-euro yokugcina ithathwa ngomunye umuntu." Iqiniso elikhulu okungenzeka ukuthi usuvele ulibonile kaningi. Kukhombisa ukuthi asikho isidingo sokujaha izikhundla emalini uma usesimweni sokuzuza kwemali. Kufanele wazi ukuthi ungahoxa kanjani zezimakethe zezimali ngesikhathi.
Ngokuqondile okunye ukwehluleka okuvame kakhulu phakathi kwabasindisa imali, ikakhulukazi labo abanolwazi oluncane ezimakethe. Kwesinye isikhathi, lokhu kushoda kwejubane ekusebenzeni kungaholela ekutheni uguqule isimo esivuna izintshisekelo zakho sibe yiphupho elibi onalo. Kungakho kuzohlala njalo kungcono ukushiya amasheya kungumholo kunokuphikisayo. Ngokuqiniseka ukuthi uyoke ube nakho.
Ukusatshalaliswa kwalomholo kubaninimasheya kuthinta uchungechunge lwezigwebo mayelana nencazelo yezabelo. Kujwayelekile kakhulu ukuzwa emaqenjini endabuko emakethe yamasheya ukuthi “amasheya akhuphuka ezikhathini zangaphambi kokukhokha izinzuzo ”. Iqiniso elicace bha elichaza ngokunembile i- ukulwa okusungulwa phakathi kwabathengi nabathengisi. Ngenxa yalokho, ezinsukwini eziholela kule nkokhelo, cishe akekho umtshali zimali othengisa amasheya akhe. Hhayi ngeze, lindela ukuqoqa isabelo sakho.
Kuyisu elikhetheke kakhulu lokutshala imali ongalihlola njalo lapho usuku lwakho lokukhokha lusondela. Uzobona ukuthi kuzoba nzima kanjani ngokungagwegwesi ukuthi ukuthengisa kuqhubeke emakethe. Ngaphandle kokuthi baphoqwe yisimo esingesihle sezimali. Kepha hhayi ngenxa yezici zangaphakathi zenkampani uqobo. Leli hose lingasetshenziswa ngesiqinisekiso esigcwele, ngoba ukwethembeka kwayo kucishe kuphelele.
Izintengo zamasheya zikhuphuka okwamanje amanani okukhokha lo mholo nomnikazi wamasheya. Futhi ngendlela efanayo, lapho sekukhokhwe egameni labatshalizimali, umphumela ohlukile uvame ukukhiqizwa. Ngokuncipha okuncane kwamanani uze ulungise ukunikezwa nokufunwa kokuphepha kwakho. Kuyisu langempela ongalisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi.
Ukuthenga ngamahemuhemu ...
Kepha uma kunesihloko par excellence esihlinzeka ngemiphumela emihle kakhulu ekusebenzeni kwamasheya, yisona esibhekise eqinisweni lokuthi “kufanele uthenge ngamahemuhemu futhi uthengise ngezindaba”. Lokhu kuchazwa ngoba izimakethe zivame ukwehlisa amahemuhemu agcwala kuma-stock exchange. Ngakho-ke, lapho izindaba ziqinisekiswa, sekuvele kunabantu abaningi abangena ngolaka ukuthenga amasheya. Ngesikhathi esifanele lapho izandla zemakethe ezinamandla zihlehlisa izikhundla zazo.
Ezimweni eziningi, ukuqinisekiswa komcimbi ophawulekayo kusho ukufika sekwedlule isikhathi kumanani. Phakathi kwezinye izizathu ngoba sengivele ngithuthukise umlenze we-bullish okumele bakwenze. Ngeke kube khona ukukhetha kepha ukungavuli izikhundla ukulinda ukushesha ngokuzayo. Ngoba empeleni, kumayelana nokuhamba phambili kwemicimbi. Futhi lowo ngumsebenzi onzima kakhulu ukuwufeza, ngaphandle kokuthi unolwazi oluyimfihlo, olujeziswa yimithethonqubo yokuvikela utshalomali.
Kufanele wazi ukuthi kulesi sigaba senqubo kungahle kube khona umehluko entengweni yayo efinyelela ngaphezu kuka-10%, ngisho nokunyakaza okunolaka kakhulu. Uma uqoqa ingxenye encane yalezi zinzuzo, kuzokwanela ukwenza ngempumelelo imisebenzi yakho yamasheya ibe nenzuzo. Lezi zinhlobo zokuhamba okubukhali zenzeka ngokujwayelekile phakathi kwamasheya ama-cap-cap ahambisa amasheya ambalwa kakhulu ezimakethe zezezimali.
Udinga imali eningi
Eminye imishwana engaphezulu noma engaphansi yezihloko ixhumene nokulondolozwa kwabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngokuqondile mayelana yini umnikelo okufanele wenziwe kuma-oda wokuthenga. Impela uzwile izikhathi ezingaphezu kwesisodwa leyo nkulumo ethi "kufanele ube nemali eningi ongayitshala ezimakethe zamasheya”. Yebo, uma lokho kugomela kuyiqiniso kuze kufike ezingeni lokuthi iminikelo iphakeme, ingcono inzuzo ekubuyiselweni kwemali. Awukwazi ukukhohlwa ukuthi ungasebenza ngokulingana kusuka kumanani angabizi kakhulu kuyo yonke iminotho yasekhaya.
Ngokuphambene nalokho, kusuka kumanani amancane kakhulu izinzuzo zizoba zincane. Ngezinga okungaba ngalo kukhishwe ngamanani ekhomishini nezinye izindleko ekuphathweni kwayo. Ngandlela thile, kuyisihloko esiveza okungokoqobo, njengoba kungenzeka wake wabona ekusebenzeni ngakunye okwenziwa ngamasheya. Kepha ngokungafani neminye imikhiqizo yezezimali, ayidingi inani eliphansi. Ungakwenza kusuka ku-euro eyodwa, yize kungesona ukusebenza okunengqondo kakhulu kusuka kuwo wonke amaphuzu wokubuka.
Enye ingxenye ye-jargon yemakethe yamasheya isuselwa ikakhulu ezinyangeni lapho kufanele wenze khona ngokusemthethweni ukusebenza kokuthenga nokuthengisa amasheya. Mayelana nalesi simo, kuvame kakhulu ukuzwa phakathi kwabadayisi bamasheya abanolwazi kakhulu ukuthingo-Ephreli kufanele ushiye izimakethe”. Incazelo yalesi sisho ilele enkolelweni yokuthi ikota yesibili neyesithathu unyaka nonyaka azikho kahle ezikhwameni. Futhi ngalokho-ke kufanele uhlehlise izikhundla, kunokuba uthathe ukucasuka okungaphezu kokukodwa.
Kungumnyakazo owenzeka izikhathi eziningi, cishe kuzo zonke izivivinyo. Kepha hhayi kubo bonke. Phakade izinyanga zokuqala zonyaka ziyi-bullish, ngezinga elikhulu noma elincane. Ngoba kusukela ngenyanga ka-Ephreli kuzoba nokulungiswa okukhulu emanani entengo ezokuphepha aqhutshwa kuze kube unyaka. Kodwa-ke, futhi ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kwenzeka okuphambene.
Ungayinaka le nkulumo incishiswe kancane, kepha ngokuqapha okuthile. Ngoba ungalahlekelwa ngamathuba ebhizinisi langempela ezimakethe zezezimali. Yini enye, akuthinti wonke amasheya. Labo ababhalwe ezimakethe zesibili abathinteki ngokuvela kwemakethe yamasheya ngokujwayelekile. Kuyindlela esetshenziswa ngabatshalizimali asebekhulile, ngoba bake babhekana nalesi simo kaningi ezimpilweni zabo.
Kunoma ikuphi, futhi ekugcineni, ngokusebenzisa le jagoni ekhethekile uzoba nethuba lokufunda okwengeziwe ngemakethe yamasheya. Okungenani kusuka kwelinye iphuzu lokubuka, kuleli cala bekungokoqobo futhi kuyisifundo. Kuzoba mnandi kakhulu kuwe ukuthi zingaki zalezi zisho ezizogcwaliseka ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Kuzoba isilinganiso esiphumelela kakhulu uku qinisekisa ukuthembeka yalolu hlelo ukutshala imali.
Njengasekhemisi, kwezinye izimo kuzobe kungalungile kanti kwezinye kuzolunga. Kunoma ikuphi, ngeke ube nokunye ongakwenza ngaphandle kokuqaphela kakhulu ekusetshenzisweni kwayo. Ngoba njengoba ezinye izihloko ezimakethe zamasheya zisho, "nguwe ogembula imali." Kulokhu, iqiniso elingaphenduki ngokuphelele okufanele ulinake ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Ufunda kanjani ngezihloko ezisemakethe yamasheya?
Amakhalenda Okusebenza 2017
Izindawo zokuthenga esikhwameni: eminye imibono